Somali | Boxing Products Supplier
Badeecada alaabadu waa wax soo saaraha iyo soo dhoofinta qalabka tufan ee tayo sarre leh, qalabka gawaarida lagu ciyaaro, qalabka gacanta, Martida Farshaxanka, Dukaamada, Rash Guard, MMA Shorts, Karate Mitts, Qalabka Ciyaaraha, MMA Qalabka, iwm. sanadka alibaba xubinimada dahabiga ah ee iibka ah. Qadarka nooca badeecada, tayada wanaagsan, iyo sicirka tartanka ayaa naga dhigay mid ka mid ah shirkadaha la isku haleyn karo ee nooca Pakistan. Dhammaan waxaas oo dhan way dhacaan sababtoo ah koox sare oo xirfad leh ayaa ka shaqeysa dhammaan waaxyada Badeecadda alaabta bacaha ah taasina waa sababta aan u leenahay xidhiidh wadashaqeyn leh macaamiisheena ajnabiga ah aduunka oo dhan si ay u fahmaan una buuxiyaan baahidooda / shuruudaha maalin kasta & wakhti kasta.
Badeecada alaabadu waxay marwalba soo dhaweynayaan si ay u habeeyaan qaababka nooca alaabeed, Qalabka oo leh calaamad kasta oo la dalbado ama magaca calaamadda. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa iibsadayaasha / soo-saarayaasha doonaya inay soo saaraan qaababkooda / qaababka shirkadaha gaarka ah ee naga sooca.
Waxyaabaha loo isticmaalo wax soo saarka waa tayada ugu wanaagsan ee loo baahdo macaamiisha, iyo walxahanas si fiican u iibiya, shaqadeena Gaadhi waa mid heer sare ah oo lagu kormeero kormeer adag oo adag dhammaan heerarka wax soo saarka. Waxaan diirada saari karnaa si dhakhso ah oo loo qorsheeyey soo dajinta si looga fogaado nooc kasta oo dib u dhac ah ee geedi socodka xayeysiinta.
Afarteennii xariiq ee wax soo saarka ugu weyn waxay leeyihiin qoto dheer iyaga oo si fudud loogu arki karo buugeena internetka.
Qalabka Baaskiiladaha: - Gacmaha Gundhiga, Gacanta, Qalabka Mitts, Qalabka Waxyaabaha Maqalka, Xirmooyinka Boodka, Xidhanaha Xawaaraha, Gacanha Madaxa, Qalabka Kalkaaliga, Goobaha Boodka, Gumeysiga Bambooyinka, Nalalka Bambooyinka, Shin Guards iyo Muay Thai Shorts.
Qalabka MMA: - Martial Arts Marti-gashan, Rash Guard iyo Tank Tops, MMA Shorts, Kick Boxing Trousers, MMA Gacmaha Qalabka, Thai Pads, Vale Tudo Shorts, Kick Shields, Karate Mitts, Karate Belts, MMA Spats iyo Ilaalinta.
Jimicsiga Jimicsiga: - Yoolalka Yoga, jimicsiyada isdabajooga, isboortiga isboortiga, jilbaha, suunka.
Garoomada: - Kursiga xargaha, Qalabka Mouth, Kursiga gacanta, Warqadaha farshaxanimada, difaaca cufka iyo furaha.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan khadadka badeecada hadda jira ama alaab cusub oo aad jeclaan lahayd inaad horumar samayso, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Marka la eego fursadda waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan u kasban karno ganacsigaaga ..
Faahfaahin dheeraad ah fadlan booqo boggeena internetka http://www.boxing-products.com